Khusela iiRente zakho zokuHlala ngokuchasene noRhwaphilizo nge3-D ekhuselekileyo
Iimbonakalo » 3-D Amakhonkco akhuselekileyo
Zikhusele ngokuchasene nobuqhetseba kunye nokubuyisela umva usebenzisa iZeevou's ekhethekileyo ye-3-D ekhuselekileyo.
Ngelixa zonke iinkampani zolawulo lwepropathi, abanini beehotele kunye nababuki zindwendwe befuna ukwandisa amanqanaba abo enzuzo ngokuthengisa ngeendlela ezininzi, ayizizo zonke iindlela ezinikezela ngokhuseleko lwentlawulo. Umzekelo woku kukuBhukisha.com (ngaphandle kokuba uhlawulelwe nguBhuki.com), kunye nokubhukisha kuthathwe ngqo nge-imeyile, ngomnxeba, okanye ngewebhusayithi yakho.
Ukuthatha iintlawulo zekhadi letyala elikude kunokukushiya uvulekele ubuqhetseba kunye nokubuyisa imali. Kwangelo xesha, akunakwenzeka ukuba usoloko uqokelela iintlawulo kunye needipozithi zokhuselo ngokudluliselwa kwebhanki, okanye ukudibana nendwendwe ekufikeni kwakho ukuze uqokelele imali okanye ugunyazise ikhadi lebhanki usebenzisa i-chip kunye ne-pin machine. Ngelixa zonke ezi ziindlela ezikhuselekileyo zokuqokelela iintlawulo, banokuthatha izibonelelo ezininzi ngexesha elifanayo, kwaye kwezinye iimeko ziya kuthintela ukuhamba kwemali kunye nokunyusa amathuba okuphulukana nemiboniso.
Zeevou's 3-D Secure Links Uncedo njani
Eyona ndlela ikhuselekileyo yokuthatha iintlawulo zekhadi ukude kukusebenzisa ii-3-D ezikhuselekileyo zonxibelelwano. I-3-D ekhuselekileyo luluhlu olongezelelekileyo lweetsheki ezigqityiweyo ngamasango okuhlawula xa ujonga amakhadi, kwaye unceda ukuthintela ukusetyenziswa kwamakhadi okungagunyaziswanga. Kwiimeko ezininzi, kumakhadi athatha inxaxheba, umnini wekhadi uya kucelwa ukuba afake iphasiwedi abavumelene ngayo nomnikeli wabo wekhadi, okanye banokucelwa ukuba bagcwalise ukungqinisisa okongezelelweyo ngekhowudi ethunyelwe ngomyalezo obhaliweyo okanye esinye isixhobo ibonelelwe yibhanki yabo.
Ukuqinisekisa ukuba iintlawulo zeendwendwe zidlula i-3-D Ukutshekishwa okukhuselekileyo kuwunciphisa kakhulu umngcipheko wokubuyiselwa imali, njengoko umntu ohlawulayo kuye kwafuneka azazise njengomnini wekhadi. Ke ngoko, endaweni yokuhlawulisa iinkcukacha zekhadi ezithunyelwa yiBooker.com eZeevou, ekhokela phambili kumzi mveliso inkqubo yokubhukisha ezenzekelayo ukukhuthaza iindwendwe ahlawule ngokusebenzisa ifom ekhuselekileyo ye-3-D. Kwangelo xesha, iindwendwe ziyakwazi ukukhuphela ifayile ye- invoice ukuhlala kwabo kwinqanaba lokuhlawula. IZeevou ikwavumela ukuba wenze ikhonkco lokuhlawula ngokuthe ngqo lokuqokelela imali yenxalenye yokuhlala okanye yokuqokelela intlawulo kumaqela aliqela ngokubhukisha okufanayo.
Ngaphezulu, iZeevou yahlukile idipozithi yokhuseleko Indawo yokuphatha ikwasebenzisa amakhadi aphumelele i-3-D ekhuselekileyo yokujonga kwangaphambili ukugunyazisa okanye ukuhlawulisa idipozithi yeendwendwe. Ngokusebenzisa ii-3-D ezikhuselekileyo zonxibelelwano kwiiNtlawulo kunye neDipozithi yoKhuseleko ungabiza iindwendwe ngaphambi kokuhlala kwazo ngendlela ekhuselekileyo kwaye wandise ukuqiniseka kwakho ukuba imali oyisebenzele nzima ayizukubiwa.